မိသားစုတစ်ခု အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ စီးပွားရေးကို လုံးဝ ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့ ယိုပေါက်ကြီး (၆) ခု – Myanmar Magazine
November 17, 2018 myanmarmagazine	ဗဟုသုတ
မြတ်စွာဘုရား ဟောထားတာကတော့ ….
လောကမှာ စီးပွားရေးပျက်ရာ ၊ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့ ယိုပေါက်ကြီး ၆ခုဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာဟာ ဘယ်တော့မှ မတည်ဘူးတဲ့…မြန်မာတွေကတော့ ပြောကြတယ်“လူမိုက်နဲ့ငွေ” အတူမနေဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာ ပျောက်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားက ဘာကိုဟောသလဲဆိုရင်
နံပါတ်(၁)က အာလသျ – လူပျင်းနဲ့ဆိုရင် ငွေဟာ အတူမနေဘူးတဲ့။ပျင်းရိလို့ရှိရင် ပျင်းတယ်ဆိုတာ ပူလွန်းတယ်၊အေးလွန်းတယ်၊ မိုးချုပ်လွန်းတယ်၊ ဆာနေသေးတယ်၊မစားရသေးဘူး၊ စားပြီးပြီ၊ ဗိုက်လေးတယ် ဆိုတဲ့အချက်တွေကို အကြောင်းပြပြီး အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့နေတာကို ပျင်းတယ်လို့ပြောတာနော်။အဲဒီလိုပျင်းရိမှုဟာလည်း ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ယိုကျဖို့ရာ အပေါက်တစ်ခုပဲတဲ့။
နောက် နံပါတ်(၂)ကတော့ ပမာဒတဲ့ – အပျော်အပါးတွေဘက်ပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့ စိတ်မ၀င်စားဘူး။လုပ်ငန်းကိုလည်း စိတ်မ၀င်စားဘူး။ အပျော်အပါးတွေကိုအမြဲတမ်း စိတ်ဝင်စားနေရင်လည်း ပျက်စီးနိုင်တယ်။
နံပါတ်(၃)က အနုဋ္ဌာန – လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်တဲ့အခါမှာတက်တက်ကြွကြွ မရှိဘူး။ ၀တ်ကျေတမ်းကျေပဲလုပ်တယ်၊ ဖြေးဖြေးဆေးဆေးပဲ။ slow ပေ့ါ…။သွက်သွက်လက်လက် လုပ်ရမယ့်ဟာကိုသွက်သွက်လက်လက် မလုပ်ဘူး။ ပျင်းပျင်းရိရိလုပ်တယ်၊ အဲဒီလိုဟာမျိုး မဖြစ်ရဘူးတဲ့။
ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ရမယ်။ အဲဒီတော့ပျင်းရိခြင်းဟာလည်း ဥစ္စာရဲ့ ယိုပေါက်တစ်ခု။
နံပါတ်(၅)က မစောင့်စည်းခြင်း၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်း အစောင့်စည်းဘူး။ကာယကံဝစီကံကိုလည်း မထိန်းသိမ်း မစောင့်ရှောက်ဘူး။ကိုယ်ကျင့်တရားကိုလည်း မထိန်းသိမ်းမစောင့်ရှောက်ဘူး။အဲဒါဟာ စီးပွားရေးယိုပေါက်တစ်ခုပဲ။
ခုနကပြောခဲ့တဲ့ အာလသျနဲ့ တန္ဒီမှာ
_ အာလသျပျင်းရိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘဲနေတာမျိုး၊
_ တန္ဒီကျတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အချိန်ကိုရွှေ့တာ
အမြဲတမ်းအချိန်ကိုရွှေ့ချင်တယ်။စောသေးတယ်၊ အချိန်ရွှေ့လိုက်တယ်။၈နာရီလောက် အလုပ်လုပ်ရမှာကို မလုပ်သေးပါဘူး။၉နာရီမှ လုပ်မယ်။ ၉နာရီကျတော့လည်း၁၀-နာရီကျမှာ သွားတော့မယ်။ဒီလိုအချိန်တွေကို ရွှေ့ရွှေ့သွားတာမျိုးကို ဆိုလိုတယ်။
အဲဒီအပေါက် ၆-ပေါက်ကို ပိတ်နိုင်မှတဲ့။
မပိတ်နိုင်လို့ရှိရင် ပစ္စည်းဥစ္စာဟာလူတွေနဲ့အတူ မရှိနိုင်ဘူးလို့ဒီလို မြတ်စွာဘုရားက ဟောတယ်။အဲဒီလိုဟောတာတွေဟာ ကိုယ့်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀မှာကောင်းကျိုးရနိုင်သလိုသံသရာအတွက်လည်း ကောင်းကျိုးရနိုင်တယ်။
မကောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရှောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကိုယ့်သန္တာန်မှာကျင့်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
ကိုသန့်ကြီးထံမှ ကူးယူ မျှဝေပါသည်။
← အသက် ၃၀ဆိုတဲ့အရွယ်မှာ ဒီလိုအရာတွေနားလည်ထားဖို့လိုပြီ !
ကိုယ်ဝန်ရလို့ ယူလိုက်တယ်လို့ ဝေဖန်ကြတဲ့အပေါ် ပြောလာတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မို →